Kooxda Manchester United oo rag u soo daawada u dirsatay labo xiddig oo ka tirsan Benfica… (Goorma ayey la soo wareegeysaa?) – Gool FM
Kooxda Manchester United oo rag u soo daawada u dirsatay labo xiddig oo ka tirsan Benfica… (Goorma ayey la soo wareegeysaa?)
Haaruun September 3, 2019
(Manchester) 03 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay diiradda ku haysto labo ciyaaryahan oo ka tirsan naadiga Benfica, isla markaana ay doonayso inay la soo wareegto bisha Janaayo ee sanadka soo socda.
Kooxda ka arrimisa garoonka Old Trafford ayaa horumarrada ay sameynayaa kor kala socota labada ciyaaryahan ee ka tirsan Benfica, Ruben Dias iyo Florentino Luis iyadoo doonaysa inay soo xero geliso horraanta sanadkan cusub, waxaana ay u dirsatay rag u soo daawada.
Man Utd ayaa la la xiriirinayey inay la soo wareegi doono labadaan ciyaaryahan suuqii xagaaga, laakiin waxa ay kaliya shaxdeeda ku soo darsatay saddexda xiddig ee kala ah; Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire iyo Daniel James.
Si kastaba ha ahaatee, macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa la filayaa inuu noqdo mid firfircoon 12-ka bilood ee soo aaddan, waxaana tababarahan reer Norway ay u badan tahay inuu bartilmaameedsan doono xiddigaha da’da yar.
Isagoo horay xiiso ugu qabay daafaca Dias iyo khadka dhexe ee Luis, Warsidaha Sport Witness ayaa shaaca ka qaaday in Man United ay u dirtay wakiillo si ay ugu soo qiimeeyaan labadaan ciyaaryahan markii ay habeenkii Axadda ahayd wajahayeen naadiga Braga.
Labadaan ciyaaryahan ayaa muujiyey sida Benfica ay uga diiwaan geliyeen guul 4-0 ah kulankaas, natiijadaas ayaana kooxda u horseedday inay kaalinta labaad ka soo gasho kala sarreynta horyaalka.
Man United ayay u badan tahay inay sii wadi doonto la socoshada iyo daawashada labadaan ciyaaryahan ee reer Portugal qeybta hore ee xilli ciyaareedkan cusub ka hor dalabyada ay ka gudbin karto midkood bisha Janaayo ama xagaaga soo socda.
Klopp oo qof walba kaga yaabsaday go’aankiisa kaga aadan dhibaatada ka dhex taagan xiddigaha Saalax iyo Mane
RASMI: Matthijs de Ligt oo ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka ee Holland